Qoysas isku heystay nin ku lumay dagaalkii 77 oo uu kala saaray sheybaar DNA oo lagu qaaday Somali.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qoysas isku heystay nin ku lumay dagaalkii 77 oo uu kala saaray...
Qoysas isku heystay nin ku lumay dagaalkii 77 oo uu kala saaray sheybaar DNA oo lagu qaaday Somali..
Muddooyinkan waxaa taagneyd hadal-heyn ku saabsan labo qoys oo ku muransanaa nin ku lumay dagaalkii 1977-dii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin waxaa arrintaas soo afjaray khubarada baaritaanka dhacaanka hiddaha ee Puntland.
Cabdirashiid Maxamuud Shire, oo ah Agaasimaha Qaybta baaritaannada Hidda Sidaha iyo Arrimaha la xiriira ee sheybaadhka Puntland, ayaa BBC-da uga warramay dadaalka ay ku xalliyeen arrintan xasaasiga ah.
Waxa uu sheegay in qofka ay baadhitaankan ku sameeyeen uu yahay nin ay da’diisu gaartay “lixdan sano iyo xoogaa” oo labo reer ay isku heysteen cidda uu asal ahaan kasoo jeedo.
“5-tii bishii August, 2020-kii, ayaan ciwaanka Twitter-ka ee ay hayaddu leedahay ku aragnay qoraal ku saabsan ninkan – oo la leeyahay ‘waayadaas buu dhumay, lama yaqaanno dadkiisii’ – waxaannu ka jawaabnay Twitter-kii, annagoo dhaheyna ‘waannu ka xun nahay dhibka ninkaas heysta’, laakiin waxaan u raacinnay in aan u sameyn karno tijaabada DNA si loogu xiriiriyo asal ahaan dadka uu kasoo jeedo.”
Previous article Ciidamo Shabaab ah oo lagu qab tabtay Deegaanka Awdiinle ee Gobolka Sh.hoose .
Next articleRa’iisul Wasaarihii hore Kheyre oo ka baaqaday shirka Decale uga u socda Midowga Musharaxiinta, Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle.
Shacab boqolaal gaaraya ayaa maanta bannaanbax careysan ka dhigay qeybo ka mid ah Muqdisho, iyagoo xiray qaar ka mid ah jidadka magaalada. Dadka dibed-baxayey ayaa...
Madaxweye Qoor Qoor oo xalay la kulmay Madaxweyne-yaashii hore Shariif, Xasan...
Halkaan ka daawo Horumarka Soomaliland ama Hargeysa ka jira maaha mid...
Xasan Cali kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay banaanbixii...